विविध – Fewa Times
बढ्दो तौल मानिसहरुको चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ । तौल घटाउने अनेक तरिका अपनाएता पनि धेरैले यसमा सफलता पाएका हुँदैनन् । स्वस्थ जीवनयापनका लागि मानिसहरुले आफ्नो तौल नियन्त्रणमा राख्न जरुरी छ । भारतीय फिटनेस एक्सपर्ट तौसिफ खानले तौल घटाउन चाहने व्यक्तिले सुत्न पहिले निम्न कार्य गर्नुपर्ने सुझाएका......
काठमाडौं – एकादशी विशेष, हरिशयनी एकादशी, एकादशीमा पुजा गर्दा के कस्तो फल मिल्छ ? आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन भगवन नारायण शेषशैयामा शयन गर्नुहुन्छ । कार्तिकशुक्ल एकादशीमा शोषशैयाबाट भगवन नारायण जाग्नुहुन्छ । त्यसकारण यी दुई एकादशीमा जसले निरन्तर भगवनको पूजा गर्दछ त्यसका हरेक पापहरू नष्ट हुन्छन् ।......
मानिसको सौन्दर्य भनेकै कपाल हो । यदी कपाल राम्रो भएन भने पनि मान्छे जतिनै राम्रो भएतापनी सौन्दर्यमा निखारता आउँदैन । तेही भएर मान्छेहरु अनेकौ स्याम्पु र अनेकौ ब्युटिपार्लर गएर कैयौ पैसा खर्च गर्छन् कपाल राम्रो बनाउनका लागि । यदी तपाईपनी यस्तै सोचमा त हुनुहुन्न ? कपाल झरेर हैरान त हुनुहुन्न ? हैरान......
तपाईलाई पत्यार लाग्छ ? मानिसको हातमा भएको कोठीका कारण उसको हातमा कति पैसा रहन्छ र टिक्दैन भन्ने जान्न सकिन्छ । शरीरमा कोठीको निकै महत्वपूर्ण प्रभाव रहन्छ । तपाइँले जति पैसा कमाएपनि तपाइँका यी अंगमा कोठी छ भने हातमा पैसा टिक्दैन । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार शरीरका विभिन्न भागमा हुने कोठीले फरक फरक फल......
थाहापाउनुस् घरमा पीपल उम्रिनु शुभ कि अशुभ ?
काठमाडौं- हाम्रो जीवनमा जनस्पतिहरुको धेरै महत्व छ । त्यसमा पनि पीपलको महत्व त धेरै रहेको छ । किनभने अन्य वनस्पतिको तुलनामा हामीलाई पीपलले अक्सिजन धेरै दिन्छ । साथै हिन्दू धमर्ममा पीपललाई भगवान विष्णुको अवतार मानेर पूजा गर्ने गरिन्छ । साथै पीपलले हामीलाई मात्र होइन सारा वातावरणलाई पनि सफा बनाउँछ......
यस्ता गुण भएकी युवती विवाह गर्ने पुरुष धेरै भाग्यमानी
शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ । समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे थाहा पाउन सकिने कुराको वर्णन गरिएको पाइन्छ ।यसैको आधारमा कुनै व्यक्तिको भविष्य बारे थाहा पाउन सकिने धार्मिक मान्यता रहेको छ......
जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ ? यी काम गर्नुहोस्
प्रत्येक मानिसको जीवनमा सफल हुने चाह रहेको हुन्छ र यसका लागि मानिसले मेहनत पनि गरिरहेको हुन्छ । कहिलेकाँही सही मार्गनिर्देशनको कमीले त्यो मेहनत बालुवामा पानि हालेसरी खेर जान्छ ।हामी तपाईको मेहनत त्यसै खेर जानुहँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । त्यसैले सफलताको कामनासहित जीवनलाई कसरी सफल बनाउने भनेर हामीले......
खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दा भुलेरपनि नगर्नुस् यी काम
असार ७,गते आइतबार (जुन २१ तारिख) नेपालबाट देखिने गरी खण्डग्रास सूर्य ग्रहण दुई नक्षत्रलाई समेट्दै मिथुन राशिमा लाग्दैछ । आइतबार बिहान १० बजेर ५० मिनेटबाट सुरु हुने उक्त ग्रहण मध्याह्न १२ बजेर ३८ मिनेटमा मध्यम अवस्थामा रहनेछ । अपराह्न २ बजेर २३ मिनेटमा पूर्णरुपमा ग्रहणले छोड्ने छ । उक्त ग्रहणले......
आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दै, ग्रहण लाग्दा नगर्नुहोस यस्तो काम, यी राशिलाई एकदमै राम्रो हुने
काठमाडौँ – आइतबार बिहान १० बजेर ५४ मिनेटदेखि खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्नेछ । मध्याह्न १२ः३८ बजे मध्य र अपराह्न २ः२३ बजे ग्रहणले मोक्ष प्राप्त गर्ने छ । काठमाडौँमा बिहान १० बजेर ५४ मिनेट, पोखरामा बिहान १० बजेर ५२ मिनेट, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरमा बिहान १० बजेर ५४ मिनेट, जनकपुरमा बिहान १० बजेर ५६ मिनेट र......
असार ७ गतेको सुर्य ग्रहणले कोरोना महामारी अन्त्य हुन्छ ? यस्तो भन्छन् ज्योतिष (भिडियो)
काठमाडौँ – सारा विश्व यतिबेला कोभिड १९ का कारण सन्त्रस्त छ । हामी नेपालीहरु पनि पशुपतिनाथको भरोसामा स्व अस्तित्वको लडाईंमा छौं । सारा विश्वमा महामारीले गर्दा जान जीवन अस्त व्यस्त बनेको छ। पुष महिनामा सुर्य ग्रहण लागेको थियो त्यस पश्चात नै कोरोनाको महामारी सुरुभएको थियो । असार ७ गते आइतवार खण्डग्रास......